Manchester City oo xiiseyneysa saxiixa da’yar ka tirsan Barcelona | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Manchester City oo xiiseyneysa saxiixa da’yar ka tirsan Barcelona
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay miisaameyso u dhaqaaqista xiddiga qadka dhexe ee Barcelona Nico Gonzalez .
19 jirkaan ayaa ku soo biirey kooxda koowaad ee Camp Nou xilli ciyaareedkan, isagoo ka soo muuqday lix jeer tartamada oo dhan, oo ay ku jiraan shan kulan oo La Liga ah.
Gonzalez waxa uu Camp Nou kula jiraa qandaraas ku eg June 2024, laakiin dhibaatooyinka dhaqaale ee Barcelona ayaa galiyay xaalad adag marka ay timaado hagaajinta heshiisyada da’yarta aadka loo qiimeeyo.
Sida laga soo xigtay Fichajes , tababaraha Man City Pep Guardiola ayaa la dhacsan ciyaaryahanka reer Spain waxaana laga yaabaa inuu kooxdiisa ku boorriyo inay soo gudbiso dalab inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga soo aadan.
Warbixinta ayaa sheegeysa in City ay doonayaan inay la soo saxiixdaan xiddig khadka dhexe oo cusub sannadka dambe, iyadoo Fernandinho uu isku diyaarinayo inuu si xor ah uga tago kooxda.
Gonzalez ayaa 27 jeer u saftay Barcelona B ka hor inta uusan ku biirin kooxda koowaad, waxaana uu ciyaaray 45 daqiiqo kulankii La Liga ee Sabtidii ay Atletico Madrid kula ciyaareen Wanda Metropolitano.
Previous articleAtletico Madrid oo ku biirtay loolanka loogu jiro xiddiga Chelsea Timo Werner
Next articleGaroonka Anfield oo Dab ka kacay Xalay, ka hor Ciyaarta Reds iyo Man City